အနှစ် ၂ခုနဲ့ ကြက်ဥ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အနှစ် ၂ခုနဲ့ ကြက်ဥ
အနှစ် ၂ခုနဲ့ ကြက်ဥ
Posted by ဆူး on Nov 6, 2010 in Myanma News, News | 12 comments
ကြက်ဥ အနှစ် ၂ခု
ယနေ့ အသိတယောက် ထမင်းချိုင့်ထဲမှ အနှစ် ၂ခုနဲ့ ကြက်ဥ ကိုတွေ့လို့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူထားပါတယ်။
သမိုင်း သီရိမြိုင်ဘူတာကတော့ နာမည်ကြီးတယ် အဲဒီ နားက သံလမ်းမှာ ညနေခင်း ရောင်းတဲ့ ဈေးသည် ရောင်းတာ တွေ့လို့ ၀ယ်လာတာလို့တော့ ပြောပါတယ် သာမာန် ကြက်ဥ တလုံး ၁၀၀ကျပ် အနှစ်၂ခု ပါတဲ့ ကြက်ဥ အကြီး ဆို ၁၂၅ကျပ်.. အလုံးပိုကြီးပြီး ၂၅ကျပ်ဘဲ ပိုပေးရလို့ သဘောကျလို့ ၀ယ်ချက်လာတာလို့တော့ ပြောတယ်။ မေးကြည့်တော့ ကြက်ဥ အနှစ် ၂ခုပါတယ်လို့ ဈေးသည်က ပြောပြီးရောင်းတဲ့ အပြင် အနှစ် ၂ခု ပါတဲ့ ကြက်ဥကို တဗန်း ထားပြီး ရောင်းနိုင်တာ အံသြလို့ပါ.. ဘာနည်းပညာတွေ များ ရှိသလဲလို့.. အနှစ် ၂ခုကတော့ ကြက်ဥတွေ မှာ ပါတတ်ပါတယ် အများကြီးဥမှ ၁လုံး လောက်ပါတာ ကို ပေါပေါ များများ ၁ဗန်းစာလောက် ရှိပြီး ခွဲခွဲခြားခြား သတ်သတ် မှတ်မှတ် ရောင်းနိုင်နေလို့ပါ.. မနှစ်က မြန်မာ သတင်း ဠာန တွေမှာ သိကြတဲ့ အတိုင်း ကြက်ဥ အတုတွေ သတိထား မိလို့ပါ.. ထမင်းချိုင့်ထဲမှာ ထည့်လာတဲ့ ကြက်ဥ ဖြစ်နေလို့.. အခွံနဲ့ တွဲ မရိုက်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး.. ချိုင့်ထဲမှာ ကြက်ဥပြုတ်နဲ့ လက်ဖက် ထည့်ထားလို့.. ကြက်ဥ ဖွေးဖွေး မလှုပ် နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်.. ထူးခြားမယ် ထင်လို့ ပုံတွေ ရိုက်ပြီး ပြလိုက်တယ်။ အမြင်တွေ ဝေဖန်ကြပါအုန်း။ မေးကြည့်တာကတော့ ကြက်ဥ အခွံခွာတော့ အမှေးပါးပါတယ်လို့တော့ ပြောတယ်။ နည်းပညာ စမ်းသစ်တာတွေ များနေတော့.. ကြက်ကို အနှစ် ၂ခု ပါအောင် ဆေးတွေ ဘာတွေ များထိုးထားလေ သလား.. တွေးမိတယ်.. အဲဒီလို ပြုပြင်ဖန်တီး ထားတယ် ဆိုရင်.. စားမိတဲ့ လူလည်း.. ဆက်တောင် မတွေးရဲတော့ဘူး။
ဆက်မတွေးပါနဲ့ အန်တီဆူးရယ် … ပုံကိုမြင်တာနဲ့ အဲဒီကြက်ဥက အစစ်ဆိုတာ သိသာပါတယ် …
အစစ် ဆိုတော်သေးတာပေါ့.. ကြက်မ ဥတိုင်း အနှစ် ၂ခု မပါတတ်တော့ ရှားပါး ပစ္စည်း ပေါပေါများများ ဗန်းခွဲပြီး သီးသန့် ရောင်းနေတာ.. စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်မိတယ်.. ဟိုတလောက တရုတ် နို့မှုန့်သောက်တဲ့ တရုတ်ပြည်က ကလေးမလေးတွေ ၁နှစ်နဲ့ အပျိုဖြစ်သွားတာတွေ.. တော်ကြာ အနှစ် ၂ခုဖြစ်အောင် ဆေးတွေ သုံးပြီး လုပ်ထားတာ ဆို.. အဲဒီ အာနိသင် စားတဲ့ လူတွေဆီမှာပါ ၁ခုစီ အပိုတွေ ထပ်ဖြစ်လာရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ.. ဥပမာ နှာခေါင်း ပါးစပ် တခု စီ ရှိရာကနေ.. ၂ခု စီဆို သွားပြီ.. ခေါင်း ၁လုံးက ၂လုံးတွေ ဘာတွေ ဖြစ်လာရင် ပိုဆိုးမယ်.. ဟီးဟီး..
အင်း …… အထက်တန်းက ဘိုင်အိုလောဂျီမှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ဆဲလ်ကွဲပြားခြင်းလိုပဲနေမှာ ….. ဥကအစက ဆဲလ်တစ်လုံးထဲ အဲ့ကနေမှ နူးကလီးယက်က နှစ်ခုကွဲ ….. နောက် လေးခု …. နောက်ရှစ်ခု …….. အခုဟာလည်းအဲ့လိုလားမသိဘူး ကြက်ဥအနှစ်က နူးကလီးယက်ဆိုတော့လေ ..
ကြက်ဥတစ်လုံးထဲမှာ အနှစ်..နှစ်ခုပါတာကတော့ တစ်ခါတစ်လေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ဗန်းလိုက်ကြီး ချရောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ တော်တော့ကို ထူးဆန်းပါတယ်… ဘယ်လိုနည်းပညာတွေများ သုံးထားပါလိမ့်…. အန်တီဆူး ..နည်းလေးများသိရအောင် ဆက်လက်စုံစမ်းပေးပါလားဟင်… အသိထဲမှာ အချိန်ကုန်..ငွေကုန်..လူပါသက်သာအောင် တစ်ခါထဲနှင့် အမြွာမွေးချင်တဲ့သူတွေကို နည်းလမ်းလေးမျှဝေချင်လို့ပါ… အဟဲ…
That is notanormal. So, we should not try.
ခင်ဗျားဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ ချိုင့်ပိုင်ရှင် ကြက်ဥပိုင်ရှင် အခုထက်ထိ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဘာမျမဖြစ်လို့ သာမှတ်လိုက်ပေတော့။
ဖန်တီးမှုလို့ထင်ပါတယ် ဆူး ရေနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကစောင့််ကြည့်ရ
တော်ကြာဆူးတွေးသလိုပါးစပ် ၂ခု ဖြစ်လာရင်
It’s called double egg which is like twin. That would not be dangereous. I know about that and have eaten that kind of eggsalot since my friend is working at chicken farm.
ဒီကြက်ဥကို စားလိုက်လို့ ပါးစပ်နှစ်ခု ဖြစ်လာမှတွေကတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးထင်တယ်… ဒီ အဆံနှစ်ခုပါတဲ့ကြက်ဥကို ဗန်းနဲ့ချီပြီးတောင် ရောင်းနေတာဆိုတော့ စဉ်းစားစရာတော့ အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ… ဘာကြောင့်လဲဆို ကြက်မတိုင်းက ဒီလို အဆံနှစ်ခုပါတဲ့ ဥတိုင်းတိုင်း နေ့တိုင်း ဗန်းနဲ့ချီရောင်းရလောက်အောင်ကတော့ ဥနေကြမှာ မဟုတ်လို့လေ… လူတွေမှာလည်း ကလေးအမွှာပူးမွေးတာတွေ ရှိနေတာပဲ… ဒါပေမယ့် အများထဲမှာမှ အနည်းလေ… ပြီးတော့ တနေရာတည်းမှာ စုပြီး ကလေးအမွှားပူးမွေးနေတာ မဟုတ်ဘူး… ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မှ အနည်းစုလေ… အခု ကြက်ဥက တစ်နေရာတည်းကနေ ဗန်းနဲ့တောင် ချီပြီ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်လည်းရောင်းနေတာဆိုတော့ကာ စဉ်းစားကြည့်စရာတော့ အကောင်းသား… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးကို တင်ပြပေးတဲ့ဆူးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ
စားလို့ ပြသနာရှိပုံ မပေါ်ပါ၊ အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တာ အဲဒီအနှစ်နှစ်ခုပါကြက်ဥ ဟင်းချက်နည်းများတောင်ရှိပါသည်။ ဝီကီပီဒီးယားမှာတွေ့တာကို ကော်ပီလုပ်လိုက်ပါသည်။
Double-yolk eggs occur when ovulation occurs too rapidly, or when one yolk becomes joined with another yolk. These eggs may be the result ofayoung hen’s productive cycle not yet being synchronized. Some hybrid breeds of hens also produce double yolk eggs by default. Such eggs are produced in West Bengal, India and in particular by Arambagh Hatcheries in Arambagh.
Some hens will rarely lay double-yolked eggs as the result of unsynchronized production cycles. Although heredity causes some hens to haveahigher propensity to lay double-yolked eggs, these occur more frequently as occasional abnormalities in young hens beginning to lay. Usuallyadouble-yolked egg will be longer and thinner than an ordinary single-yolk egg. Double-yolked eggs usually only lead to observed successful hatchlings under human intervention, as the chickens interfere with each other’s hatching process and die
ပါးစပ် နှစ်ခု ဆိုတာ မြင်သာအောင် ဥပမာ ပေးတာပါ..
ဗန်း တခု စာလောက် ဥတယ် ဆိုတာ.. စဉ်းစား စရာဖြစ်နေလို့ပါ..
ကြက်တွေ ဥတတ်တာ အမှန်ပါ။
ရွှေမျိုးပေါက်ဖော်တွေ လက်သန်ပြောင်တတ်တော့.. သတိထားမိအောင် ရေးပေးတာပါ။
ဈေးထဲမှာ ဗန်းနဲ့ရောင်းတယ်ဆိုကထဲက အရေအတွက်မများပါဘူး .. ကြက်ခြံထဲမှာ အဲဒီကြက်က အမွှာဥတယ်ဆိုရင် သူကအမြဲတမ်း အမွှာပဲဥတာ .. အဲဒီလိုကြက်များများရှိနေတယ့် ကြက်ခြံဖြစ်လိမ့်မယ် … မျိုးရိုးလိုက်တဲ့သဘောပါ … တစ်ခါကလဲ လှည်းတန်းဈေးက ကြက်ဥခပ်ကြီးကြီး ၁၀ လုံးဝယ်လိုက်တာ ၈ လုံးလောက်က အနှစ် ၂ ခုနဲ့ဖြစ်နေတာကြုံဖူးသေးတယ် …